Bangiga Mag-Safe Power, 5000Mah Mag-Safe Charger Charger, Bank Magnet Power Bank la qaadan karo oo wata laba gal iyo wax soo saar, 15W Soosaarayaasha iyo alaableyda iPhone 12/12 Mini / Pro / Max (Buluug) Kaydka Xawaaraha Sare ee 15W | M-Boqoradda
Amraya Degdeg ah: Awooddan mobilada xeedho-la'aanta ah ee Mag-ammaan ah ayaa loo isticmaali karaa iPhone 12/12 Pro / 12 Pro Max / 12 Mini oo si dhakhso ah ugu shaqeeya 15W Dhex-dhexaad sare oo loogu talagalay Qi wireless-ku-dallaca smart smart, istaagida wireless-ka ayaa si caqligal ah u aqoonsan kara taleefannada gacanta isla markaana si dhakhso ah u soo dallacaya.
Midab: casaan madow oo buluug cad ah
Cabir: 85 * 55 * 12.5MM
• Stick & Charge: Hal talaabo oo lagaa qaado. Ku dhaji xeedhokan la qaadan karo dhabarkaaga taleefankaaga casriga ah, ka dibna si ku-meel-gaar ah ugu-dallacaya qalabkaaga iyada oo aan fiilooyin lahayn.
• Amraya Degdeg ah: Awooddan mobilada xeedho-la'aanta ah ee Mag-ammaan ah ayaa loo isticmaali karaa iPhone 12/12 Pro / 12 Pro Max / 12 Mini oo si dhakhso ah ugu shaqeeya 15W. Dhex-dhexaad sare oo loogu talagalay Qi wireless-ku-dallaca smart smart, istaagida wireless-ka ayaa si caqligal ah u aqoonsan kara taleefannada gacanta isla markaana si dhakhso ah u soo dallacaya.
• Bangiga Awoodda Sare & Dual Input Power Bank: Bangigan awoodda badan ee jeebka ku jira wuxuu hayaa batari awood badan oo 5000mAh ah oo dib loo soo celin karo. Ku qalabaysan wax soo gal laba-geesood ah oo ah Micro USB iyo Nooca-C, waxaad dib u buuxin kartaa bangigaaga korontada oo aad ugu habboon adoo isticmaalaya ku-darka nooca C ama Micro USB-ka.
• La qaadan karo & Iftiin: Ka kooban muuqaal aad u cufan & naqshad safar-saaxiibtinimo leh, waxay ku habboon tahay jeebkaaga ama boorsadaada si fudud adigoon ku jirin boos aad u fara badan isla markaana hubin karta in la qaadan karo meel kasta oo aad tagtid. Ku habboon guriga, xafiiska, iyo fasaxyada.
• Wax ku ool badan: Xeedho Mag-Ammaan leh ayaa ka dhigaysa lacag-ku-dillaac xadhig degdeg ah. Waxaa jira 2 ikhtiyaar oo lacag bixin kala duwan ah oo ku yaal bangiga korantada gacanta, kaas oo buuxin kara baahiyaha isticmaaleyaasha kala duwan. Macaamiisha ayaa si xor ah uga soo dalici kara boosteejada USB-C isla markaana si isku mid ah ugu dallacaya taleefankaaga gacanta silig la’aan. Kaliya iska hubi inaad doorato fiilada saxda ah oo aad si adag ugu xirto qalabka 2.
Hore: 5000mAh Slim Magnetic Powerbank oo leh Wareeg Giraha 5W xeedho xawli dheereeya ah oo loogu talagalay taleefannada casriga ah ee iPhone Android